राजपालाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेर्न नचाहनेहरूले भ्रामक प्रचार गरिरहेछन : महामन्त्री सिंह — Bhaktapurpost.com
राजपालाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेर्न नचाहनेहरूले भ्रामक प्रचार गरिरहेछन : महामन्त्री सिंह
जितेन्द्र सिंह महामन्त्री , राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
काठमाडौ, २१ मंसिर
० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा संयोजक परिर्वतन भएसँगै पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद चरम सीमामा पुगेको छ नि ?
— सबैको आ–आफ्नो प्रस्तुुती र दृष्टिकोण हुन्छ । राजपामा संयोजक परिर्वतन भएको कुरा पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया नै हो । यस विषयमा साथीहरूको जे जस्तो प्रतिक्रिया आएको छ त्यसअनुसार त्यस्तो विवाद पार्टीभित्र देखिएको छैन । राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माणको समयमा नै चक्रीय प्रणालीमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको हो र वैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । एकीकरणका बेलामा तत्कालीन तमलोपा ठूलो पार्टीको हैसियतमा थियो । त्यसैले महन्थ ठाकुरजीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइयो । उहाँको नेतृत्व सन्तोषजनक भएको र सबैको आदरणीय भएका कारण उहाँलाई नेतृत्व दिइएको थियो । अहिले अध्यक्षमण्डलमा चक्रीय प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यता पुनः पलाएकाले वैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अहिले यो निर्णय गरिएको हो । बाँकी जति नकारात्मक प्रचारहरू भएका छन् यो सबै राजपाको भलो नचाहने, राजपालाई एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेर्न नचाहने व्यक्तिहरूको भ्रमात्मक प्रचार मात्र हो ।
० यसको मतलब पार्टीभित्रै पनि पार्टीको भलो नचाहनेहरू पनि छन् ?
— राष्ट्रिय जनता पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कहिल्यै नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन । यदि कसैले यस्तो गर्छन् भने हामीलाई केही भन्नु छैन ।
० अध्यक्षमण्डलकै एक नेताले सार्वजनिक रूपमा नै पूर्वसंयोजक महन्थ ठाकुरजीलाई जुन किसिमले आरोपहरू लगाउनु भएको छ यसले पार्टी भित्र चरम विवाद रहेको तपाईलाई लाग्दैन ?
— जसरी तपाइँले संकेत गर्नुभयो अध्यक्षमण्डलका एक जना जिम्मेबार व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्नु भयो । उहाँको त्यो शैलीसँग हामी पनि सहमत छैनौं । उहाँको अभिव्यक्ति पार्टीको हितमा छैन । हाम्रो सुझाव छ नेताहरू पनि जिम्मेवार हुनुप¥यो । उहाँको जवाफमा पनि केही साथीहरू साथीहरू आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रिनुभयो । यस्ता गतिविधि पार्टीको हितमा कदापि हुन सक्दैन । नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि नै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको निर्माण भएको हो । राजपामा अहिले देखिएको सामान्य विवाद तथा असहमतिलाई पञ्छाउँदै अगाडी बढ्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र वादविवाद हुनु, छलफल हुनु, सहमति÷असमहमति हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । स्वभाविक प्रक्रिया अनुसार नै राजपामा केही सहमति असहमतिका कुराहरू भएका छन् । यसलाई लोकतान्त्रिक पक्षधरले सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यहाँ यस्ता सानातिना सहमती/विमती र बहस भई नै रहन्छन् ।
० अध्यक्षमण्डलका एक जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै सार्वजनिकरूपमा नकारात्मक अभिव्यक्ति आएपछि पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूमा कस्तो सन्देश जान्छ त ?
— हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार भनिरहेका छौं कि आफ्ना मनका कुराले पार्टी चलाउने होइन । पार्टी जनताको जनादेश र कार्यकर्ताको मतादेशबाट चल्ने हो । मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम हाम्रो अभिभारा अहिले बाँकी नै छ । नेपालको यो अधुरो संविधानलाई संशोधन गराउनु पर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व बाँकी छ । हाम्रा धेरै योद्धाहरू जेलमा हुनुहुन्छ, झुठा मुद्दामा फसाइएका छन्, ती मुद्दाहरू सम्बोधन गराउने काम राजपाको काँधमा रहेको छ भन्ने कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन हाम्रा नेताहरू । आफ्नो निजी स्वार्थका लागि पार्टीलाई बदनाम गराउने, राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर गराउने काम कसैबाट नहोस् । जजसले सार्वजनिकरूपमा गैरराजनीतिक तरिकाले वक्तव्य दिनुभएका छन्, उहाँहरूलाई चारैतर्फबाट आलोचना भएको छ । अब उहाँहरूले यस्तो गर्नु हुन्न र गर्नु पनि हुँदैन । कुनै पनि विषयमा सहमति असहमति जनाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस् तर अन्त्यमा सहमति र संवादमा गएर पार्टीलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।
० संयोजकप्रति जुन किसिमका आरोपहरू छन्, ती आरोपहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
— अध्यक्षमण्डलको अनौपचारिक बैठकबाट यी कुराहरू मिलिसकेका छन् । अबको समयमा पार्टीलाई अगाडी बढाउने विषयमा सबै नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ । समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडी बढ्ने एउटा वातावरण निर्माण भएको छ । त्यसैले पुराना कुरालाई कोट्याएर बाटो बिगार्ने काम नगर्दा उचित होला । तर विगतका दिनहरूमा राजपाले जे ग¥यो त्योे उपलब्धि, जनआन्दोलनमा जनादेश लिनका लागि मतादेश लिनका लागि देखाएको एकता सुझबुझका साथ गरेको नेतृत्व र मधेशी जनताको सहयोग हो । अबको समयमा आएर केही नेताहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरूमा सम्पूर्ण कायकर्ता पंक्तिका दोस्रो तहका नेताहरूको सुझाव आएको छ । उहाँहरूले आफ्नो प्रवृत्तिमा परिर्वतन गर्नैपर्ने हुन्छ । हामीहरूले लिखित तथा मौखिक रूपमा विभिन्न पदाधिकारी, राजनीतिक समितिको बैठकबाट अध्यक्षमण्डललाई पटक–पटक सुझाव दिइरहेका छौं । वक्तव्यबाजीमा कसले कसरी बोल्ने कुराको पुष्टाई तर्फ आज जानुपर्ने सन्दर्भ समयसापेक्ष छैन ।
० अनुशासनभन्दा बाहिर रहेर बोल्नेहरूलाई कारबाही होला त ?
— निश्चितरूपमा । पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर जाने जो कोहीलाई पनि छुट छैन । पार्टीले अनुशासनहीन काम गर्ने र बोल्ने पार्टीलाई अहित हुने गतिविधिमा संलग्न हुने जो सुकैलाई पनि उच्चस्तरीय छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
० अध्यक्षमण्डलको संयोजक परिवर्तन विधानअनुसार नै हो ?
— अध्यक्षमण्डलको संयोजक परिवर्तन सर्वसम्मतमा नै भएको देखिएको छ । पार्टीको विधानमा अध्यक्षमण्डलले पार्टी सञ्चालन गरेपनि सबै निर्णयहरू सर्वसम्ममा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । र यो पहिलो पटक बहुमतीय प्रणालीबाट संयोजक परिर्वतन गर्ने प्रक्रिया आयो । यो पनि पार्टीको हितका लागि राम्रो होइन । आजसम्म सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतमा भएका थिए तर यो निर्णय पनि सर्वसम्मतमा नै हुनुपर्ने थियो । बहुमतीय प्रणालीमा पार्टी चलाउने कही पनि बैधानिक व्यवस्था छैन र सहमतीय प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निर्णय बहुमतबाट भएको हामीले सुनेका छौँ । त्यसैले हामी सल्लाह गरिरहेका छौ कि अब बहुमतीय प्रणालीबाट अगाडी बढ्ने कि पहिलेकै सहमतीय प्रणालीबाट । पार्टी भित्र कतै पनि अस्विकारको प्रतिक्रिया नआउँदा नआउँदै पनि संयोजक किन बहुमतीय प्रणालीबाट भयो भन्ने प्रश्न सबैको अगाडी खडा भएको छ । बहुमतीय प्रणालीबाट अध्यक्षमण्डलको संयोजक परिवर्तन गर्ने निर्णय उचित थिएन ।
० भनेपछि संयोजक चयन विधान विपरित भएको हो ?
— विधान विपरित त होइन, तर नेताहरूले गम्भीर भएर अझै छलफल गरेको भए महन्थजी उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने, विधानभन्दा बाहिर जाने व्यक्ति उहाँ होइन । अध्यक्षमण्डलका ६ जना पनि विधानभन्दा बाहिर जाने अवस्था थिएन । यो किन हतार भयो भन्ने एउटा प्रश्न नै छलफलको मुख्य विषय रहेको छ । अरू जिल्लामा पनि यस्ता समस्याहरू आएको र पछि पार्टी भित्रै छलफल गरि सर्वसम्मत गराइएको घटना पनि हामीसँग छ ।
० महाधिवेशनको मुखमा आएर संयोजक परिर्वतन हुँदा महाधिवेशनमा कतिको असर पर्ला त ?
— संयोजक परिर्वतनले महाधिवेशनमा त्यत्ति असर पार्दैन । महन्थ ठाकुरजीले पनि भन्नु भएको छ कि पार्टी भित्र हाम्रो कुनै किसिमको विवाद छैन । यो संयोजक परिर्वतन सामान्य प्रक्रियाबाट नै भएको हो । त्यसैले संयोजक परिर्वतनका कारण महाधिवेशनमा कुनै किसिमको असर पर्दैन ।
० भनेपछि अब दुई/दुई महिनापछि संयोजक परिवर्तन भइरहन्छ ?
— तत्कालको निर्णयले हामीलाई त्यहि बाटो देखाउँछ । अहिलेको चक्रीय प्रणाली भन्नाले समयअवधि पुग्दै जाँदा संयोजकत्व हस्तान्तरण हुँदै जान्छ । यहि निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने समय अवधि पुग्दा सहजरूपमा नै संयोजक परिर्वतन हुन्छ र हुनै पर्छ ।
० पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण अहिले तपाईहरूको मुख्य माग ‘संविधान संशोधन’ गौण भएको देखिएको छ नि ?
— अहिलेको घटनाक्रमले हाम्रो मुख्य माग गौण भयो भन्न मिल्दैन । हाम्रो राजनीतिक मुद्दा यथावत् नै छ । यो माग हाम्रो पार्टीको मात्र नभई यो जनआन्दोलनबाट प्राप्त सम्पूर्ण मधेशवासीको हो । त्यसैले संविधान संशोधन गराउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । हामीले सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिइसका छौं कि हाम्रो माग पूरा होस्, संविधान संशोधन होस् । तर सरकारले हाम्रा मागहरूलाई बेवास्ता ग¥यो भने हामी पुनः नयाँ ढङ्गबाट आन्दोलन गर्नेछौँ । पहिलाभन्दा सशक्त तरिकाले आन्दोलन गरी कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकारलाई घुँडा टेकाउँछौ । पहिला हामी ६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई एक चरित्रमा ढालेर सशक्त रूपमा मधेशको आन्दोलन र शहीदको बलिदानलाई खेर जान नदिनेगरि अगाडी बढेने छौँ ।
० विगतमा फोरमसँग मिलेर आन्दोलन गर्दा त माग पूरा भएन । अहिले फोरम पनि सत्तापक्ष छ, कसरी सरकारको घुँडा टेकाउन सक्नुहुन्छ ?
— अहिले नेपालको राजनीतिमा मधेशी मात्रको एक मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दल राजपा हो । र यो हाम्रो घमण्ड होइन ।
० तपाईहरूले सरकारलाई कहिलेसम्मका लागि अल्टिमेटम दिनुभएको छ ?
— हामीले सरकारलाई छठसम्म हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं भनेका थियौं । तर तत्काल पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम तथा महाधिवेशनका कार्यक्रमहरू आए त्यसैले केही ढिला भएको हो । यो कार्यक्रमको छिनोफानो गरे लगत्तै हामी पुनः सरकारलाई एक पटक घच्घकाउने छौँ । त्यसपछि पनि सरकारले ध्यान दिएन भने हामी आन्दोलनमा जाने छौँ ।